XOG: Shirkii dib-u-heshiisiinta beelaha Galmudug oo dib u dhacay, Ogow Sababta? | HalQaran.com
XOG: Shirkii dib-u-heshiisiinta beelaha Galmudug oo dib u dhacay, Ogow Sababta?
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Guddiga qaban qaabada Shirka dib u heshiisiinta Beelaha dega deegaannada Galmudug ayaa Maanta oo Axad ah waxaa ay ku dhawaaqeen in dib u dhac uu ku yimid shirka oo lagu waday in uu furmo 5-ta Bisha Agoosto oo ku beegan Maalinta Berrito ah.
War kasoo baxay Guddiga ayaa waxa lagu sheegay sababta dib u dhaca shirkaas ay tahay in, iyada oo tixgalinaayo maalmaha baroordiiqda loo asteeyey iyo munaasabadda maamlmaha Ciidul Adxaa ee foodda nagu soo hayso dib loo dhigay mudada shirkaas.
Sidoo kale, Guddiga ayaa sheegay in Shirka dib u heshiisiinta Beelaha dega deegaannada Galmudug la qaban doono 17 Bishaan, isla markaana looga baahan yahay Ergooyinka ka qeyb galaya inay tagaan Magalada Dhuusamareeb.
Shirka dib u heshiisiinta Beelaha dega deegaannada Galmudug ayaa waxaa jira beelaha qaarkood ee degan deegaannada Galmudug oo shaaciyay inaysan ka qeyb galeen shirkaas, iyaga oo soo bandhigay shuruudo dhowr ah.
Magaalada Dhuusamareeb ayey taallo gogosha Shirka dib u heshiisiinta Beelaha Galmudug, inkastoo aanan la ogeyn sida shirkaasi uu u qabsoomi doono maadaama beelaha qaar ay diideen ka qayb galkiisa.
Shirkii dib-u-heshiisiinta beelaha Galmudug